Fitsaboana ny homamiadan'ny loha sy ny hatoka San Diego - Proton any California
Fitsaboana Proton amin'ny fitsaboana kanseran'ny loha sy hatoka
Miady amin'ny homamiadan'ny loha sy ny hatoka miaraka amin'ny Precision toy ny laser
Ny teknolojia fanaraha-maso vatan-jaza pensilihazo an'i California Protons dia endrika marim-pototra amin'ny fikorontanan'ny taratra amin'ny homamiadana izay ahafahan'ny dokotera manendry tsokosoko voafantina hita amin'ny faritra saro-pady sy saro-pady sy saro-pady miaraka amin'ny taratra avo lenta.
Ny teknolojia scanil beam dia manasitrana ny fivontosan'ny lohany sy ny tendany amin'ny alàlan'ny fampitana ny taratra proton miaraka amin'ny haavo 2-milimetatra. Izy io dia manafika ravin-tenda amin'ny alàlan'ny sosona, mamonosotra endrika mivalona be pitsiny mba hampihenana ny habetsaky ny taratra omena amin'ny hozatra sy taova mahasalama. Zava-dehibe eo amin'ny lohany sy ny tendany izany, satria matetika dia mitaky taratra ambony be loatra ireo taratra ireo ary averina ao anaty rafi-doha lehibe, toy ny atidoha, nerve nerve, tiroida, salivary glandes, esophagus, boaty feo, valanoranom-bolo ary tadin-tsina.
Fitsaboana Proton ho an'ny loha sy hatoka
Ny antsipirian'ny fitsaboana amin'ny homamiadana
Kanseran'ny loha sy hatoka miverimberina (notsaboina taloha)
Fototry ny homamiadana
Larynx kansera (boaty feo)
Aretim-bava sy vava
Ratra amin'ny tenda
Salivary gland gland
Sinus kansera (nasopharyngeal)
Ny homamiadana hypopharyngeal
Ny homamiadana oropharyngeal
Ny homamiadana Tonsil
Mampihena ny fatra amin'ny rafi-dalàna mahazatra toy ny atidoha, nerve nerve, tiroida, salivary gland, esophagus, boaty feo, valanoranom-boasary ary tadidy1
Ity fitetezana fantsom-piainana ara-dalàna ity dia mety hitarika fiantraikany amin'ny lafiny fohy kokoa, fotoana fanarenana haingana, ary mety hihena ny filana famahanana sakafo2
Ny fivezivezena mikiky amin'ny protons dia mety hampihena ny ratra amin'ny taolan-tevana3
Amin'ny tranga sasany, ny proton dia manatsara ny fifehezana ny aretina sy ny fivelomana4, 5, 6
Mampihena ny loza mety hitranga amin'ny homamiadana faharoa noho ny taratra7
Soa azo avy amin'ny fitsaboana Proton ho an'ny homamiadan'ny loha sy ny hatoka
Ny haitao fanaovana scanner-nay indrindra dia manara-maso tsara ny angovo proton and, ary, avy eo, ny toerana misy ny fitaterana taratra ambony indrindra fantatra amin'ny hoe tampon'ny Bragg. Io dia ahafahantsika mitsabo endrika fivontosana sarotra kokoa sy miovaova ny fatra ao anaty fivontosan'ny loha sy ny hatoka.
Ny fitsaboana protonolika mandroso dia mamela ny dokotera amin'ny fomba voafantina tsara amin'ny taratra avo lenta amin'ny homamiadana marobe, ary mampihena ny fatra amin'ny manodidina ny taova salama sy ireo sela mihintsy. Amin'ny toe-javatra sasany, izany dia naseho mba hanomezana fitsaboana haingana kokoa noho ny fitsaboana taratra X-ray na dia amin'ny toe-javatra sarotra aza.
Satria ny fitsaboana ny loha sy ny hatoka dia afaka mametra tsara kokoa ny taratra ivelan'ny tanjona, ny dokotera dia mety afaka mampihena ny taratra amin'ny sela salama tompon'andraikitra amin'ny fahitana, fihainoana, tsiro, fahaizana miresaka, mihinana sy mitelina ary miasa ny ati-doha.
Fomba fitsaboana ny Proton ho an'ny samihafa
Karazana homamiadan'ny loha sy ny hatoka
Ny fivontosan'ny loha sy ny tendany dia eo akaikin'ny rafitra manan-danja; mety hanimba ny fitomboan'ny fivontosana tsy mitongilana. Miankina amin'ny sehatra amin'ny lohany, ny tendany, ny tenda, ny vava na ny lela, ny fitsaboana mitambatra, ny fitsaboana simika ary ny taraina dia mety hila amin'ny fivontosana sasany. Ny safidy fitsaboana koa dia voakasik'ireo karazana homamiadana sy safidin'ny marary amin'ny ankapobeny.
Ny homamiadana am-bava dia matetika manomboka amin'ny sela matevina sy manify izay mivezivezy amin'ny molotrao sy ny ao anaty vavanao, anisan'izany ny takolanao, tafo ary ny gorodon'ny vavanao. Ny fitsaboana fitsaboana Proton ho an'ny homamiadan'ny vava dia mety hampihena ny fatran'ny taratra amin'ny hozatra mahazatra tsy mikendry sela rehefa mikarakara ny fivontosana vava.
Ny homamiadana ny tenda dia mahavoa ny fivontosan'ny homamiadana izay mivoatra amin'ny tendanao na havokavony. Ny isan'ny marary mahatsapa fatiantoka mavesatra na mila fantsom-pamonoana dia nihena efa ho 50% amin'ireo marary nahazo fitsaboana proton. Ary telo volana aorian'ny fitsaboana, ny marary proton ny tenda dia voan'ny nitatitra ihany koa ny vava maina maina.2
Ity karazana kansera am-bava ity dia miorina ao amin'ny fototra na eo alohan'ny lela ary matetika mivoatra ao amin'ny sela matevina sy malefaka. Ireo fivontosana ireo dia mazàna mitaky dosie avo be. Ny fitsaboana ny proton ho an'ny homamiadan'ny lela dia mety hisorohana ny fanimbana ny molotrao, ny glandine salivary, ny valanozy, ny glandine tiroida ary ny tadin'ny hazondamosina. Amin'ny tranga sasany dia mety hihena ihany koa ny risika ateraky ny tsy fahampian-tsakafo manandrana, mitelina, mihinana ary miresaka.
Ny kansera naratra matetika dia manomboka ao amin'ny sela manam-bidy izay mampifandona ny faritra mando, mucosal ao anaty lava-oran'ny orona sy sinus. Ny fitsaboana ny proton dia mety ho mikendry ny fivontosana mafy amin'ireo loham-panjakao sy ny rafitry ny orona satria ny maso, ny vava, ny ati-doha ary ny lalan-dra sy ny lalan-dra matetika no eo akaikin'ny fivontosana. Ny fihenan'ny taratra lehibe kokoa dia mety hampihena ny mety hisian'ny fihenan-tsainy, toy ny fahaizana manitra, manandrana, mitelina ary miresaka. Amin'ny toe-javatra sasany, ny fitsaboana proton dia nanatsara ny fifehezana ny aretina sy ny fahavelomana amin'ny marary amin'ny fivontosan'ny sinus-para-nasal.4, 5, 6
Kanseran'ny loha sy ny hatoka
Ny fitsaboana ny faritra voabo teo aloha dia mety ho sarotra, indrindra amin'ny lohany sy tenda. Ny fihodinana faharoa amin'ny fitsaboana taratra X-ray dia mety hampidi-doza satria tsy ho adinon'ny “tsimokaretina miady” ny tavy salama manodidina ny fivontosana miverimberina. Mampalahelo fa misy fatra fanampiny afaka mampitombo ny ratra amin'ny ratra eo amin'ny vatana. Ny fitsaboana aram-bohitra Proton, amin'ity fametrahana ity, dia mety hahafahan'ny dokotera mifantoka tsara amin'ny fatra amin'ny lasibatra ary hametra izany any an-toeran-kafa, izay mety hamela ny fitsaboana indray miaraka amin'ny ratra any amin'ireo marary voafantina.
Vokatry ny fitsaboana lohany sy hatoka
Ny fitsaboana Proton ho an'ny homamiadan'ny loha sy ny hatoka ao amin'ny California Protons Cancer Therapy Center any San Diego dia mety hampihena ny risika sy / na ny hamafin'ny voka-dratsy maharitra toy ny fahasimban'ny fahitana, ny fihainoana ary ny tsiro. Ny taratra proton dia mety hampidina ny risika homamiadana faharoa koa, satria tsy misy taratra maivana mankany amin'ny sela ara-dalàna. Na izany aza, ny fitsaboana ny homamiadan'ny loha sy ny hatoka dia misy tombony sy fatiantoka, izay miovaova arakaraka ny toe-javatra manokana ananan'ny marary. Raha fantatra fa voan'ny homamiadan'ny lohanao na hatoka ianao dia aza hadino ny miady hevitra momba ireo loza mety hitranga, ary koa ny safidy fitsaboana, amin'ny oncologist anao.
Fikarohana fikarohana manohana fitsaboana Proton ho an'ny homamiadan'ny loha sy ny hatoka
1 Ny fitsaboana ny taratra Proton beam dia miteraka fihenan'ny fahasimbana be raha ampitahaina amin'ny fitsaboana taratra miovaova amin'ny fihenan-doha sy ny tendany izay mitaky taratra ipsilateral
2 Fitsaboana beam-modulated therapy protine beam therapy (IMPT) sy fitsaboana foton-novaina mahery vaika (IMRT) ho an'ny marary manana homamiadana oropharynx - fandalinana tranga nifanaraka.
3 Ny fitsaboana proton novaina intensity sy osteoradionecrosis amin'ny homamiadana oropharyngeal
4 Fitsaboana fiompiana voaaro sy fitsaboana ho an'ny foton-dra ho an'ny sinus paranasal sy aretina mivaingana voan'ny tazo: fandinihana miandàlana ary famakafakana
5 Vokatry ny homamiadana Sinonasal voatsabo amin'ny fitsaboana proton
6 Vokatry ny fotoana maharitra aorian'ny fitsaboana ny fitsaboana beam-bary Proton ho an'ny carcinoma sela Sinonasal
7 Ny fisian'ny tsy fahampiana faharoa amin'ny marary izay voan'ny proton manohitra taratra foton
Fitsaboana proton novaina intensity ho an'ny carcinoma nasopharyngeal: mihena ny fatra radiation amin'ny fananganana mahazatra ary mamporisika ny vokatra klinika
Ny poizina mihetsiketsika ao amin'ny taratra amin'ny loham-bolo sy ny tendany amin'ny valan'aretina nasopharynx sy paranasal sinus: cohort fampitahana ny fitsaboana proton hozatra 3D sy ny halavan'ny fitsaboana taratra
Fomba fitsaboana mikaroba orbit-Multidisciplinary izay misy fitsaboana fitsaboana Proton ho an'ny homamiadana epithelial ao amin'ny Orbit sy Ocular Adnexa
Ny fampitomboana ny fampitomboana ny fikorontanana ny fihetsiketsehana an-doha ho an'ny fivontosan'ny lohany sy ny tendany: Multifield optimization
Ny atahorana ny fivontosana faharoa sy ny fatra amin'ny rafi-pandrefesana neurocognitive taorian'ny proton manohitra radion photonne ho an'ny meningioma mety maty
Ny fitsaboana aretin-tsaina miabo (IMPT) dia mampihena ny filàna ahitra amin'ny fofona amin'ny alàlan'ny 50 isanjato amin'ny marary sy ny homamiadana.
Ny carcinoma cystic adenoid amin'ny sela sinonasal: Vokatry ny fitsaboana.
Fivoarana amin'ny radiotherapy amin'ny homamiadan'ny loha sy ny tenda
Ny fanombanana ny homamiadana faharoa voan'ny kansera amin'ny fitsaboana proton ary ny IMRT ho an'ireo taova ao anatin'ny sehatry ny taratra voalohany.
Kapoka sy vozom-bary masaka ary sela bitika sela misy fanafihana perineural
Fitsaboana aretin-doha sy proton ary ny homamiadana faharoa.
Ny fanovàna henjana amin'ny radioterapiitera: foton-tsary mifanohitra amin'ny proton ao amin'ny sinus paranasal
Ny fanatsarana ny drafitra fitsaboana dimension telo sy ny fitsaboana proton amin'ny vokatry ny homamiadan'ny sinus ambony
Fitsaboana ny taratra Proton beam ho an'ny malemy sy lohany
Fitsaboana taratra hozatra (Proton beam) fitsaboana ho an'ny karandoha cystic karsinoma adoboid
Therapy radiation Proton ny chordomas sy chondrosarcomas ny fototry ny karandoha
Fitsaboana ny taratra Proton ho an'ny homamiadan'ny loha sy ny tenda
Radioteroka Proton hoan'ny rhabdomyosarcoma parameningeal: vokatra klinika sy fiantraikany tara
Fitsaboana radiation taratra ho an'ny malignances sinus sphenoid voalohany: valin'ny fitsaboana ary antony prognostic
Radiotherapy Proton ho an'ny rhabdomyosarcoma orbital: vokatra klinika sy fampitahana dosimétika miaraka amin'ny fotony
Fomba fitsaboana ny proton ho an'ny homamiadan'ny loha sy ny tenda: ny fanavakavahana, ny mety ho fambara, ny fiheverana azo ampiharina ary ny porofo ara-pitsaboana ankehitriny
Ny fanazavana indray amin'ny alàlan'ny vondron-javam-basy zaridaina ao amin'ny fivontosan'ny lohany sy ny tendany miverimberina: famonoana poizina ary azo atao
Therapy scanam beam proton therapy vs therapy-radiated radiation fitsaboana ho an'ny ipsilateral lohany sy ny vozony malignancies: fitsaboana fanitsiana drafitra.
Ny tombony azo avy amin'ny radioterapiely miaraka amin'ny proton ao amin'ny homamiadan'ny loha sy ny tendany raha ny fanaingoana ny tavy ara-dalàna: famerenam-bokatra momba ny literatiora
Ny fampandrafetana drafi-pandrefesana ny fitsaboana ny fampifanarahana ny foton-tsolika mahazatra sy ny fanamoriana ny efijery (IMRT) sy ny fitsaboana proton ho an'ny karamaoma sinus paranasal
Vokatry ny fahitana momba ny taratra mihena haingana noho ny tsy fahampian'ny sinonasal mivoatra mampiasa fotaka / proton